Xiddiga Premier League Dele Alli Oo Xiriirkiisa Jaceyl U Burburiyay Sabab La Yaab Leh Oo Caruurnimo Ah | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXiddiga Premier League Dele Alli Oo Xiriirkiisa Jaceyl U Burburiyay Sabab La Yaab Leh Oo Caruurnimo Ah
Xiddiga Premier League Dele Alli ayaa xiriirkiisii jaceyl ee gabadha lagu magacaabo Ruby Mae burburiyay iyadoo asxaabtiisa ay sheegeen in sababtu ay tahay inuu waqti badan ku qarashgareeyay ciyaarista ciyaar gacmeedka online-ka ah ee Fortnite.
Lamaanahaan oo oo da’dooda ay 24 sanno jir tahay ayaa kala tagay ka dib markii ay dhowr jeer isku dhaceen sababo la xiriira waqtiga dheer uu ku mashquulsan yahay ciyaar gacmeedka, iyadoo ka guurtay gurigooda 2da milyan ginni ku fadhiya.
Saaxiibo ku dhow xiddiga Tottenham ayaa sheegay in gabadhaan moodalka ah Ruby inay ka carootay dabeecadaha cusub ee uu la soo baxay xiddiga Ingariiska oo ay ka mid tahay inuu waqti badan ku bixiyo ciyaarista Fortnite.
Mid ka mid ah asxaabtiisa ayaa u sheegay wargeyska The Sun: “Dele Alli iyo Ruby Mae waa ay u kala dhamaatay.
“Xiriirkooda waxa uu ahaa mid aan caga badan ku taagneyn laakiin haatan waxaa la dareemayaa inuu soo dhamaatay. Ruby waa ay niyadjabsan tahay laakiin nafteeda ayay ka taxadareysaa.
“Waxay dhibsatay qaab nololeeda Dele Alli, waxayna qaadatay alaabteeda”
Waxay xiriirkooda soo afjareen ka hor inta aan la gaarin maalintii Jaceylka Adduunka ee 14kii Febraayo.
Ruby oo moodal u noqotay shirkadaha Dolce & Gabbana iyo Chanel ayaa markii ugu horeysay xiriir jaceyl la bilowday Dele Alli sannadkii 2016. Waxay muddo kooban kala tageen 2018 ka hor inta aysan isku soo laaban.